dayniile » C/raxmaan Faroole oo Iska Casilay Xubinimadda Guddiga Dibu eegista Dastuurka
C/raxmaan Faroole oo Iska Casilay Xubinimadda Guddiga Dibu eegista Dastuurka
Senator Cabdiraxmaan Maxamed Faroole madaxweynihii hore ee Maamulka puntland oo kamid ahaa xubnaha guddiga Dib u eegista Dastuurka ee labada Aqal Soomaaliya ayaa ku maanta dhawaaqay in uu iska casilay xiligii uu ka hayay guddiga.
C/raxmaan Faroole ayaa iska casilay xubin in uu kasii ahaado guddiga dib u eegista Dastuurka ee labada Aqal Soomaaliya, waxaana uu sheegay in uu sababo u gaar ah arrintan u sameeyey.
Sidoo kale C/raxmaan Faroole ayaa dadaal badan ugu jiray inuu noqdo Guddoomiyaha Guddiga dastuurka labada Aqal, inkastoo uu ka guuleystay Senator Cabdi Qeybdiid madaxweynihii Hore ee Maamulka Galmudug.
Kulan Xildhibaanada Aqalka sare ay maanta ku yeesheen xaruntooda ayaa laga akhriyay warqad uu soo gudbiyay C/raxmaan Faroole, kaasoo uu ku codsanayo in laga aqbalo inuu iska casilay xubinimada Guddiga.
Sidoo kale Madaxweynihii Hore ee Maamulka Mr Faroole ayaa ku sugneyn Aqalka sare, xilliga laga akhrinayay warqada is casilaada iyo baaqa Guddoonka ee ku aadanaa buuxinta booskaas.